पत्याउनुहुन्छ, चीनमा चट्टानबाटै निस्किन्छ अण्डा ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /रोचक/पत्याउनुहुन्छ, चीनमा चट्टानबाटै निस्किन्छ अण्डा !
पत्याउनुहुन्छ, चीनमा चट्टानबाटै निस्किन्छ अण्डा !
एजेन्सी– संसारमा विचित्रका ठाउँ छन् । विचित्रका घटनाहरु पनि घटिरहेका हुन्छन् । केही घटनाहरुले मानिसलाई निकै अच्चमित र आश्चर्यचकित बनाउँछन् ।